Nhau - Ndedzipi mhando uye zvakanakira counterbalance cranes
Ndeapi marudzi uye zvakanakira counterbalance cranes
Balance cranesinokodzera kupfupi nzira yekusimudza basa munzvimbo dzakadai sematura, mota yekuratidzira zviteshi, etc. Mamiriro ayo ari nyore kushandisa, kurerukirwa, nyore kugadzirisa, etc. Balance crane inogona kukamurwa mumhando dzakasiyana zvichienderana neakasiyana nzira dzekuisa, tarisa .
1. Yakarongwa maererano nemaitiro ekufambisa simba: pneumatic counterbalance crane, hydraulic counterbalance crane, pedal counterbalance crane, nezvimwe.
2. Yakakamurwa nenzira yekufamba: mobile balance crane uye portable balance crane.
3. Zvinoenderana nechiyero crane kureba uye hupamhi reshiyo: pfupi chiyero crane uye yakakwirira chiyero crane, nezvimwe.
Balance craneserudzi rutsva rwemidziyo yekusimudza zvinhu, inoshandiswa zvakanyanya mumabasa emazuva ano einjiniya, inoshandisa yakasarudzika spiral yekusimudza nzira yekusimudza zvinhu zvinorema, pachinzvimbo chekushanda kwevanhu kuderedza kushanda nesimba, idiki uye yepakati-saizi mechini kusimudza. midziyo, inoshandisa zvine hungwaru mana-link mechanical musimboti, kushandiswa kwemanyorero uye mota yakapusa kubatana uye kuumbwa kwemubatanidzwa wekufamba kutakura zvinhu zvinosimudza, kuitira kuti kusimudza zvinhu sezvinodiwa chero nguva gara wakagadzikana mune chero chinzvimbo munzvimbo yebasa. mukati menyika, kuita nechiyero chekusangana.
Balance crane mumidziyo yekusimudza yakarumbidzwa zvakanyanya, ndosaka?Izvi hazviparadzaniswe nekushanda kwayo.
Balance crane inonyanya kuumbwa nekoramu, musoro furemu, ruoko uye chikamu chekutumira, chine compact chimiro uye chimiro chakanaka.
Balance crane ne "balance of gravity" inoita kuti kufamba kuite kupfava, kushanda kwekuchengetedza vashandi, kuri nyore uye kunyanya kuchinjika kuti kuve nekugarobata kubata, kusangana kweiyo post process, kunogona kuderedza zvakanyanya kuwanda kwevashandi, kuvandudza kushanda zvakanaka.
Iyo counterbalance crane ine basa rekuputsika kwemhepo uye misoperation kuchengetedza.Kana iyo huru yekupa mhepo sosi yakagurwa, iyo yekuzvivharira mudziyo inoshanda kuitira kuti counterbalance crane isadonha kamwe kamwe.
The balance craneinoita kuti gungano rive nyore uye rikurumidze, kumira kwacho kuri kwechokwadi, zvinhu zviri munzvimbo ine mativi matatu-yakaturikwa mukati meiyo yakarongwa sitiroko, uye zvinhu zvinogona kutenderedzwa kumusoro nekudzika, kuruboshwe uye kurudyi nemaoko.
Ese mabhatani ekudzora anonangidzirwa pamubati wekutonga, uye mubato wekushanda unobatanidzwa neiyo workpiece zvinhu kuburikidza nekugadzirisa.Saka chero bedzi iwe uchifambisa mubato, iyo workpiece material inogona kufamba nayo.
Nguva yekutumira: Feb-16-2022